Nilaza ny polisy fa jiolahy ireo telo lahy lavo. Ireo olona teny an-toerana kosa nilaza fa efa nanangan-tanana sy nandohalika nifona ny roa tamin’izy ireo. "Nisy olona roa nanao fanamiana sivily tonga nanatona teo amin’ireo olona nanamorona ny arabe nijery baolina. Avy hatrany dia nanambana basy olona ny iray tamin’ireo. Tsy salama saina anefa io voambana basy io ka tsy niraharaha. Olona nipetraka teo akaiky teo avy eo no nifoteran’ilay basy. Nitifitra ilay nanambana basy. Nahita izany ilay voatifitra dia nandohalika no sady nanangan-tanana nifona", hoy i Nandrianina, iray tamin’ireo nijery baolina teo akaikin’ilay lehilahy iray voatifitra.
"Nisy lehilahy iray hitako nitsoaka no sady saika hijapy môtôn’olona mandeha. Nitifitra tamin’ny basy io lehilahy io, saingy namaly tifitra ihany koa ny polisy ka lavo izy", hoy kosa ny lehilahy iray hafa isan’ireo teny an-toerana ihany koa.
"Naharay antso ny “Groupe d’intervention rapide“ (Gir) tokony ho tamin’ny 10 ora sy sasany fa misy olona mivorivory sady mitam-basy eny amin’ny sisin-tamboho eny Ankorondrano akaikin’ny “Henri Fraise“. Rehefa nidina teny an-toerana ny polisy dia mailo ireo fito lahy ka namoaka basy ny roa hitifitra. Lavon’ny polisy taorian’ny fifampitifirana i “Magnifique“, “Beloha“ ary Noelison Vincent de Paul", hoy ny tatitry ny polisim-pirenena. Ireo roa lahy voalohany dia voalaza fa « isan’ireo nanafika Sinoa vahiny teny amin’ny Espace Salohy teny Andoharanofotsy ary nahaverezana 2 400 tapitrisa ariary tamin’ny taon-dasa »,raha ny filazan’ny polisy ihany.
Nambara ihany koa fa isan’ireo nanafika mpanam-bola tany Foulpointe tamin’ny fotoanan’ny “THB tour“ ka nahaverezana 9 000 tapitrisa ariary, izy ireo.